Burcad lagu eedeeyay iney dhac u geysteen Ganacsato Soomaali oo lagu maxkamdeeyay K/Afrika | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Burcad lagu eedeeyay iney dhac u geysteen Ganacsato Soomaali oo lagu maxkamdeeyay...
Burcad lagu eedeeyay iney dhac u geysteen Ganacsato Soomaali oo lagu maxkamdeeyay K/Afrika
Afar ruux oo loo soo xiray in lacago baad ah ay ka qaadan jireen Ganacsadayaal Soomaali ah ayaa waxaa lasoo taagay Maxkamada Bellvile Court ee dalka South Afrika, waxaana ay iska diideyn dhamaan eedaha loo heysto.
Ragaani ayaa waxaa la sheegay in ay lacago baad ah ay ka qaadan jireyn ganacsado Soomaali ah oo xarumo ganacsi ku leh Xaafada Delfi ee Magaalada Cape Town, waxaana la sheegay in ay dukaankiiba ka qaadan jireyn lacag gaaraysa R2,000 oo lacagta dalka Koonfur Afrika ah.
Xaakimka dacwadaan qaadayse oo lagu magacaabo Zakia ayaa waxa sheegtay in go’aanka kama dambeysta ay dib ka gaari doonto balse ilaa intaas ragaan xabsiga lagu siin heyn doono.
“Dacwad fudud ma ahan, waxaa loo sii baahanyahay cadeymo intaan dheer, waana sababta aan dib ugu dhigay go’aanka kama dambeysta ah” ayey sheegtay Xaakim Zakia.
Ragaan eedeysanayaasha ah ayaa la sheegay in Soomaalida ganacsadata ah ay u sheegeen in ay ka difaacayaan kooxaha burcada ah ee beegsada Soomaalida taasi badalkeeda ay siiyaan lacago baad ah oo ay ku difaacayaan.